Fampiharana telo ilainao hampandehanana tsara ny orinasanao ecommerce | Martech Zone
Be dia be ny mpivarotra ecommerce any - ary anisan'ireny ianao. Ao anatin'izany mandritra ny fotoana maharitra ianao. Araka izany, mila mahay mifaninana amin'ny fivarotana an-jatony an'arivony tsara indrindra amin'ny Internet ianao ankehitriny. Fa ahoana no anaovanao an'izany?
Ianao dia mila maka antoka fa ny tranonkalanao dia toy manintona araka izay azo atao. Raha ratsy endrika izy io dia tsy manana anarana tsara, kely loatra ny endritsoratrao (na lehibe loatra), mifangaro miaraka amin'ny làlan'ny fivarotanao an-tserasera ny sary famantarana anao, ny bokotra fitetezana dia toerana tsy dia mendrika (eritrereto ny bara fikarohana!), na raha toa ny loko nofidinao tao amin'ny tranonkalanao tsy mandeha tsara amin'ny kolontsaina amidinao, dia mila mieritreritra ny famolavolana ianao. Izany no fiatombohanao.
Raha manana ny fivarotana ecommerce anao matihanina mahatsapa izany, avy eo dia mila mijery ireo vokatra amidinao ianao. Izy ireo ve no mahasarika ny mpihaino marobe, sa ny hananana antokon'olona mpanjifa manokana? Na izany na tsy izany dia tsara, fa mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazanao izany raha tsy mikarakara ny mpividy anao ianao. Ary koa, misy kalitao avo lenta ve ireo, sa mora manafarana? Raha misaraka ny vokatrao, dia ho toy izany koa ianao.
Topazo maso ny anao -barotra. Ahoana ny fomba varotrao ny orinasanao? Iza amin'ireo tranonkala no anaovanao doka sy ny fahombiazan'ireo sehatra ireo? Fampiasana tsara ny volanao ve izany? Hamarino tsara fa mahazo ny tombony lehibe indrindra ianao ary mahomby araka izay azo atao ny ezaka ataonao.
Raha miasa izany rehetra izany dia tonga ny fotoana handefasana ny orinasanao. Raha efa misy ny zavatra hafa rehetra, azonao atao ny manomboka mijery ny fizotranao sy ny asanao manokana hanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny hafainganan'ny serivisy ary ny famenoana ny varotra.
Mba hanampiana anao amin'ireo lafiny amin'ny asanao ireo, dia miresaka momba ny fampiharana tsara indrindra azonao atao hitantanana ny fivarotana ecommerce anao izahay.
The Google Analytics Ny fampiharana dia hanome anao ny lafiny roa amin'ny lafiny marketing amin'ny orinasanao sy ny varotrao. Ny fampiharana dia mamela anao hanara-maso ny fitsidihan'ny tranokalanao. Azonao atao ny mahita ny isan'ny fahitana azon'ny pejy tsirairay. Azonao atao ihany koa ny mahita ny isan'ny fitsidihan'izy ireo mandritra ny fotoana, nofaritan'ny sivana napetrakao ao amin'ny app.
Ity fampiharana ity dia ahafahanao mahita hoe avy aiza ny fomba fijery. Ny ankamaroan'ny fanantenan'ny mpanjifanao dia mety miantsena ny tranokalan'ny ecommerce anao avy any ampitan-dranomasina ary tsy tsapanao izany. Ny fahitana ireo fitarihana ireo dia ahafahanao manova ny maodelin'ny orinasanao ary mikarakara bebe kokoa ny fivarotana an-tserasera mankany amin'ny mpanjifa vahiny izay maniry hividy ny vokatrao.
Ary koa, amin'ny fahitana ireo pejy izay amidy dia azonao atao ny mahita ireo karazana vokatra novidian'ny mpanjifanao. Hanome anao ny fotoana hamafana ireo entana tsy amidy ary hitondra andalana vokatra tadiavin'ny mpanjifanao.
Midira ho an'ny Google Analytics
Ity dia fampiharana mahafinaritra! Orinasa biriky sy mortara mila miantehitra amin'ny maodely nentim-paharazana nentim-paharazana ny famatsiana ny magazay amin'ny vokatra: tsy maintsy mahita mpivarotra ambongadiny izay mitondra ny vokatra tian'izy ireo entina ao amin'ny fivarotany izy ireo, avy eo mividy azy ireo amin'ny vola betsaka mba hahazoana ny vidiny mirary indrindra (na satria ny mpivarotra ambongadiny dia mila haben'ny kaomandy farany ambany azo tratrarina).
Avy eo izy ireo dia mila miandry ny fahatongavan'ilay vokatra herinandro maromaro taty aoriana. Amin'ny tranga misy an'ireo mpivarotra rojo toy ny Wal-Mart sy Target, ireo entana ambongadiny dia tokony hatolotra amin'ny foibe fizarana aloha alohan'ny handaminana azy, hoentina isaky ny magazay, ary avy eo halefa any amin'ireo magazay samy hafa.
Ireo mpivarotra ecommerce dia hiankina amin'ireo mpivarotra ambongadiny nentim-paharazana ho an'ny ankamaroan'ny vokatra vokariny. Saingy miova ny fotoana, ary Oberlo dia manome magazay kely an-tserasera fomba tsara kokoa amin'ny fivarotana ny vokariny.
Raha tokony hividy amin'ny mpamatsy amin'ny ankapobeny ianao dia tsy mila manafatra zavatra iray, farafaharatsiny, mandra-pahatongan'ny mpanjifa mametraka baiko. Oberlo dia mamela anao hanafatra vokatra avy amina mpamatsy an'arivony mivantana amin'ny fivarotana an-tserasera. Avy eo apetrakao amin'ny mpamatsy anao ny baikon'ny mpanjifa. Ny mpamatsy dia handefa ny kaomandy eo am-baravaran'ny mpanjifa.
Fiovana lehibe io eo amin'ny fifandraisana mpivarotra / mpivarotra ambongadiny satria tsy mila mandoa vola amin'ny vokatra marobe ny mpivarotra. Ny entana dia mandeha mahitsy avy amin'ny mpivarotra ambongadiny mankany amin'ny mpividy.
Misoratra anarana maimaim-poana ao Oberlo
SalesforceIQ dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho anao Customer Relationship Management. Ity fampiharana ity dia manome anao ny fahaizana mihetsika amin'ny olan'ny mpanjifa; raha misy olana amin'ny fizotrany dia hampahafantatra anao ny mpanjifanao. Ity fampiharana CRM ity dia hamela anao hamaly an'ireo olana ireo, na amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa na amin'ny fomba fijerinao manokana. Azonao atao ny manomboka manamboatra ny olana eo noho eo.
SalesforceIQ koa dia mampifangaro ireo fantsona media sosialinao rehetra amin'ny sehatra afovoany. Azonao atao ny manatona ireo vahininao sambatra sy mifanerasera amin'izy ireo, misaotra azy ireo amin'ny fomba hitan'ny rehetra. Azonao atao ihany koa ny mifandray amin'ireo namanao sy naman'ny sakaizan'ny mpanjifanao amin'ny fikasana hamadika azy ireo ho mpanjifa vaovao. Amin'ity fampiharana CRM ity dia afaka mamorona orinasa miverimberina ianao ary koa manomboka fidiram-bola vaovao ho an'ny fivarotana ecommerce anao.
Amin'ireo fampiharana ireo dia hahafahanao mitantana ny orinasanao amin'ny fomba mahomby sy mahomby. Afaka mitazona ny safidin'ny vokatrao sy ny stock ianao raha manararaotra ny fifandraisana amin'ny mpivarotra sy ny mpamatsy ho an'ny famenoana haingana.
Ho vitanao koa ny hitantana ny fifandraisan'ny mpanjifanao sy ny fifandraisany ary hivarotra ny olon-kafa mety hitranga. Ny fandinihana ny varotra avy amin'ireo rindrambaiko ireo dia hanome anao ny fahaizana mihetsika amin'ny fironana ara-barotra amin'ny fotoana tena izy, hanome anao fotoana hampitombo ny varotra amin'io andro io ihany.
Amin'ireo fampiharana ireo dia hataonao mahomby sy mifaninana kokoa ny orinasanao.
Misorata anarana amin'ny fitsarana SalesforceIQ maimaim-poana
Tags: ecommerceentana ilaina amin'ny varotra
Ahoana ny fomba hamafana ireo tsikera WordPress rehetra